प्रकाशित मिति : : शनिबार, मंसिर १६, २०७४
डा. मृगेन्द्रराज पाण्डे चर्चित डाक्टरमध्येका एक हुन् । मुटुरोग विशेषज्ञ डा. पाण्डे स्व. राजा महेन्द्रका निजी चिकित्सक थिए । राजा महेन्द्रकी आमा कान्ती राज्यलक्ष्मीदेवी शाहको उपचारमा संलग्न हुँदै गर्दा उनले पूरै राजपरिवारका सदस्यको उपचार गर्नुप¥यो । ३१ जनवरी १९७२ सालमा राजा महेन्द्रको हृदयाघातका कारण मृत्यु भयो । त्यतिवेला राजपरिवारभित्रैबाट डा. पाण्डेलाई राजा महेन्द्रलाई मारेको आरोप लाग्यो । तर, उनले सार्वजनिक रूपमा आफूलाई लागेको आरोपको कहिल्यै खण्डन गरेनन् । राजा महेन्द्रको मृत्युबारे उनले सुनाएका छन् :
३१ जनवरी १९७२ को दिन, बिहानको ७ बजे अकस्मात् मलाई फोन आयो । त्यो दिन म हेटौडामा थिएं । राजा महेन्द्र अस्वस्थ भएको हुनुपर्छ, मेरो मनमा लागिसकेको थियो । त्यो बिहान मलाई एक प्रकारको छटपटी भइरहेको थियो ।
मलाई केही आक्षेप लगाउनुभएन । त्यसलगत्तै म दिल्ली गएँ । त्यहाँ रहँदा बेलायतका राजदूतसँग भेट भयो । उनले मलाई डाक्टर सा’ब तपार्इं त भाग्यले बाँच्नुभयो, दरबारमा त राजा महेन्द्रलाई गलत औषधि खुवाएर मारियो भन्ने हल्ला छ त भने । मैले उनलाई भारतीय डाक्टर डा. एमएल भातीलाई सोध्नुस् भने । मैले डा. भातीलाई महेन्द्रलाई गरेका सबै उपचारका कुरा राजपरिवारमा सुनाएर आउ भनेँ । उनले गएर राजपरिवारका सबै सदस्यका अगाडि हाम्रो देशको राष्ट्रपतिलाई भए पनि डा. पाण्डे र म भएर जेजति प्रयास ग¥यौँ योभन्दा बढी गर्न सकिने थिएन भने । उनले राजालाई बचाउन हामीले गरेका सबै प्रयासहरू स्पष्टका साथ सुनाए । त्यसपछि राजपरिवार सदस्य साम्य भए । रानीलाई पनि मैले यसपटक महेन्द्र सरकारलाई बचाउन निकै कठिन छ भनेर पहिला नै भनेको थिएँ ।
राजा महेन्द्रले १० माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । भरतपुरमा बैठक धुमधामका साथ चलेको थियो । राजाले जबर्जस्ती पास गराउन खोज्नुभयो, तर अरूले त्यसलाई रोके । पहिलो प्रयास असफल भयो । उहाँ रिसाउँदै आजलाई छोडौँ
अर्को हप्ता माघ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जसरी पनि पास गराउँछु भन्नुभएको थियो ।
नया पत्रिका बाट ।